भक्तपुरमा करेन्ट लागेका मजदुरको उद्धार गरिँदै ! – Sandesh Press
January 5, 2021 115
भक्तपुर नगरपालिका–१ सल्लाघारी व्यासी सडक खण्डअन्तर्गत इतापाकेमा सडकवत्ती जडान गर्न खम्बामा चढेका मजदुरलाई करेन्ट लागि बेहोस भएको अवस्थामा उद्धार गरिँदै । तस्वीर : रत्न श्रेष्ठ, रासस
काठमाडौँ | साउदी अरेविया र कतारबीच हवाई, स्थल र समुद्री नाका खोल्न सहमती भएको छ । सहमति अनुसार साउदी अरेवियाले कतारसँगको स्थल नाका खोलेको छ । हवाई तथा समुद्री नाका पनि खोलिने संचारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । कुवेतका विदेश मन्त्री अहमद नासिर अल सवाहले सोमवार यसको जानकारी दिएको अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् ।
कुवेतका विदेश मन्त्री सवाहले एक टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्ता अनुसार ति दुवै देश तीन बर्षदेखिको नाकावन्दी अन्त्य गर्न सहमत भएको उल्लेख गरेका छन् । नाकावन्दी अन्त्यको घोषणा खाडी मुलुकहरुको सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा भएको हो । यसले खाडी क्षेत्रमा देखिएको समस्या अन्त्य हुने भन्दै उनले खुशी प्रकट गरेको समाचारमा जनाइएको छ ।
दुई देशबीचको स्थल नाका खोलिएको घोषणा भएपनि कुनै व्यक्ति वा सवारी साधन आरपार गरेको नदेखिएको दोहास्थित सञ्चार माध्यम अलजजिराले लेखेको छ । नाका स्थित कार्यालयमा दुवै देशका अध्यागमन अधिकारीहरु देखिएपनि नाका शान्त रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।सो समाचारलाई साउदी अरेवियाका सञ्चार माध्यमहरुले पनि प्राथमिकताका साथ छापेका छन् । साउदी गजेटका अनुसार मंगलवार आयोजना हुने सम्मेलनमा कतारको नेतृत्व त्यहाँका शेख तामिम वीन हमद अल थानीले गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । कतारले सन् २०१७ मा नाकावन्दी सुरु भएपश्चात पहिलोपटक खाडी सम्मेलनमा सहभागिता जनाउँदैछ ।
Prevदुई भाई बिरुद्ध उजुरी परेपछि तनाबमा सलमान !
Nextइन्सपेक्टर पिताले डीएसपी छोरीलाई सल्युट गरेको तस्विर सामाजिक संजालमा भाइरल